ချစ်ရင်ထူး II | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts by ချစ်ရင်ထူး II	17
ကျွန်တော်နှင့် Highway လမ်း
Comments By Postကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Ma Ma - TNAအတ္တဆန် - padonmar - ခရီးသည်ကြီးယုံလား? - အလင်း ဆက် - မောင် ပေအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - အလင်း ဆက်ကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်မင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moePassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - Ma Ma - TNAနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - အလင်း ဆက် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - padauk moe - padauk moeရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - padonmar - Shwe Eiစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - မောင် ပေ - Mobile13မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TNA - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - TNA - အလင်း ဆက်မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ko pauk mandalay - ခရီးသည်ကြီးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - ခရီးသည်ကြီး“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - မောင် ပေ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - မောင် ပေ - TheWinner Getprize``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - TheWinner Getprize - ခရီးသည်ကြီးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities